Mushure mekumwe kunonoka, Microsoft yatanga kuburitsa kunze Kuwedzera Kuwedzeredza KB4571744 ye Windows 10 2004.
Parizvino sarudzo yekusarudzika, chigamba chinosanganisira gadziriso yeakakosha dhisiki manejimendi nyaya iyo yaizoona kudzokororwa kudzokororwa kweSSD yako, iyo inogona kupedzisira yakonzera kurasikirwa kwedata
Iyo yakazara switchlog inoverenga:
Inogadzirisa nyaya inogona kutadzisa ActiveX yezvinyorwa kubva pakutakura.
Kugadziridza nyaya inogona kukonzeresa maapplication anoshandisa echinyakare mameseji ekuputira basa kuti arege kushanda mune mamwe mamiriro.
Kugadziridza nyaya kudzikisa mukana wekushayikwa mafonti.
Kugadziridza nyaya inotadzisa vashandisi kudzikisa saizi yehwindo mune dzimwe nguva.
Kugadziridza nyaya inokonzeresa iyo yekubata keyboard kuvhara kana iwe wabata chero kiyi
Inopa kugona kweDolby Atmos mahedhifoni uye DTS Headphone: X inoshandiswa mune 24-bit modhi pane zvishandiso zvinotsigira 24-bit odhiyo.
Inogadziridza nyaya ine chiratidzo chisina kujeka muchiratidziri.
Kugadziridza nyaya ne Windows Kugadziridza kuve kusingateereri kana uchitsvaga zvekuvandudzwa.
Kugadziridza nyaya inokonzeresa File Explorer kuti irege kushanda kana iwe uchitarisa madhairekitori emifananidzo yakasvibirira uye mamwe marudzi emafaira.
Inonatsiridza ruzivo rwepiritsi yezvinhu zvinoshandurwa kana zvakasanganiswa mumamiriro akadzika.
Inovandudza ruzivo rwevashandisi ve Windows Mhoro mapeji ekunyora echiso uye zvigunwe zvigunwe.
Kugadziridza nyaya inokutadzisa kuvhura chishandiso kana iwe wakataipa nzvimbo pamberi pezita rekushandisa pawakatanga kupinda muchigadzirwa.
Kugadziridza nyaya inokonzeresa kuti maficha atore nguva yakareba kuvhura.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira maapplication kubva kurodha pasi gadziriso kana kuvhura mune mamwe mamiriro.
Inogadziridza nyaya inokonzeresa maMicrosoft Office kunovhara zvisingatarisirike kana uchishandisa Korea IME.
Inomutsiridza ruzivo rwenguva yeYukon, Canada.
Iyi isiri-yekuchengetedza dhaireti inosanganisira kuvandudza kwemhando. Shanduko dzakakosha dzinosanganisira:
Inogadzirisa nyaya ine rakapetwa Wedzera-ins inoita kuti Microsoft Outlook ive isingadavidzi.
Inopa kugona kuenzanisa iyo Microsoft Edge IE Mode unidirectional musangano cookie kana maneja anogadzirisa chikamu cheki cookie.
Inogadzirisa nyaya nekupa PeerDist-encoded yezvinhu muInternet Explorer uye Microsoft Edge.
Kugadzirisa nyaya inogona kutadzisa ActiveX yezvinyorwa kubva pakutakura.
Inogadzirisa nyaya inoratidza skrini nhema ku Windows Virtual Desktop (WVD) vashandisi pavanoedza kusaina.
Inogadzirisa nyaya inogona kukonzera maapplication anoshandisa shuwa mavara ekupukuta basa kurega kushanda mune zvimwe zviitiko.
Inogadzirisa nyaya neKutanga menyu maapplication uye mataira mune chaiwo desktop desktop (VDI) nharaunda. Nyaya yacho inoitika mushure mekunge mapinda muVDI nharaunda kechipiri uye shandisa Remote Desktop Mushandisi Mbiri Dhisiki mune risingapfuurire rakadzika desktop desktop.
Inogadzirisa nyaya inogadzira kukanganisa kana uchidhinda kudhipatimendi repositi.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira Visual Basic 6.0 (VB6) application kubva kushandisa ListView mukati MSCOMCTL.OCX mushure mekusimudzira kuenda Windows 10, vhezheni 1903 uye gare gare.
Anogadzirisa chikanganiso chenguva yekumhanya iyo inoita kuti VB6 imire kushanda kana zvadzokororwa windows mameseji anotumirwa kuna WindowProc ().
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa yekumira kukanganisa kana iko kutanga kweiyo grafiti adapta ikatadza.
Inogadzirisa nyaya yekudzora mukana wekushayikwa mafonti.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira vashandisi kubva kudzikisa saizi yehwindo mune dzimwe nguva.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa iyo yekubata keyboard kuvhara kana iwe ukabata chero kiyi.
Inogadzirisa nyaya inowedzera isingadiwe keyboard dhizaini seyakasarudzika mushure mekusimudzira kana kutama kunyangwe iwe watobvisa dhizaini.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira maficha kubva pakuvhara kunyangwe programming kodhi ichivatungamira kuti vavhare.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kuyedza kutora skrini yehwindo uchishandisa iyo PrintWindow API kutadza.
Inogadzirisa nyaya ine ndangariro inodonhedza mukati tfm.exe izvo zvinoitika kana iwe uchizorodza chishandiso chine bhokisi rinochinja.
Inogadzirisa nyaya inotora runyorwa rungangoita rwevatambi (vavhoterwa) paunonyora mavara muiyo Yakareruka Chinese (Pinyin) yekuisa nzira yekugadzirisa (IME). Kana izvi zvikaitika, mavara echiChinese haaratidzike.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira yekutanga kiyi sitiroko kubva pakuzivikanwa nenzira kwayo mu DataGridView sero.
Inogadzirisa nyaya inokonzera application inoshandisa mscf.dll kumira kushanda, uye iyo 0xc0000005 (Kuputsa kukanganisa) kunze kunoonekwa.
Kugadzirisa chinetso neDynamic Data Exchange (DDE) iyo inokonzeresa kubvaruka kwekuyeuka kana vatengi vazhinji vachibatana neserver imwechete.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira Cortana Smart mwenje kushanda sezvinotarisirwa kana iwe ukadzima muchina nepo Fast Shutdown ichigoneswa.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira iyo IME mushandisi duramazwi kubva pakushandiswa paunenge uchitsvaga dhairekitori redirection nemaprofiles emushandisi.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa Microsoft Hofisi kunyorera kuvhara zvisingatarisirike kana uchishandisa Korea IME.
Inogadzirisa nyaya inoratidza zvisiri zvisina kunaka fenicha maficha mu File Explorer kana nzira yacho yakareba kupfuura MAX_PATH.
Inogadzirisa nyaya ine chiratidzo chisina kujeka muchiratidziri.
Inogadzirisa nyaya ne Windows Kugadziridza kuve kusingateereri kana uchitsvaga zvekuvandudzwa.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira iyo chaiyo yekukiya skrini kubva pakuonekwa kana inotevera marongero akaiswa:
Sisitimu "Inopindirana Logon: Usade Ctrl + Alt + Del" yakaiswa ku "Akaremara"
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kuti File Explorer imire kushanda kana uchinge waongorora madhairekitori emifananidzo uye dzimwe mhando dzefaira.
Inodzivirira maakaundi kubva kune mumwe akasiyana roja kubva kusaina kupinda kuSurface Hub chishandiso.
Kero dzinomira kukanganisa 0xC2 mu usbccgp.sys.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa iyo Yekutarisa iMicrosoft Management Console (MMC) kumira kuita basa kana weti wechipiri ari pamusoro peyekutarisa kwekutanga. Kunze kwematare kunobuda pachena.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira kutama kweiyo Windows Remote Management (WinRM) sevhisi yekutanga mhando.
Inogadzirisa nyaya ine zvigadzirwa zvekuita mashoma.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira yeMicrosoft User Experience Virtualization (UE-V) zvigadziriso kubva mukufamba-famba kuita kuti mafaira esiginicha ayo anoshandiswa mameseji matsva, kutumira mameseji uye mhinduro.
Anogadzirisa nyaya inodzivirira vashandisi kubva pakuisa REG_EXPAND_SZ makiyi mune mamwe maekisesaizi kuitika.
Inogadzirisa nyaya neiyo EnhancedAppLayerSecurity node mune yemazuva ano manejimendi manejimendi (MDM) iyo inodzivirira iyo marongero kubva mukuiswa nenzira kwayo kune vatengi mutero.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa ndangariro kuvu HuruIya.exe matanho kana sevha iri pasi peinorema kuisimbisa mutoro uye Credential Guard inogoneswa.
Inogadzirisa nyaya inogona kukonzera kunonoka kusvika kumaminetsi maviri kana uchipinda kana kuvhura musangano paHybrid Azure Active Directory-yakabatana michina.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira kusaina hash kubva mukushanda nemazvo kana uchishandisa Microsoft Platform Crypto Provider yeTrusted Platform Modules (TPM). Iyi nyaya inogona zvakare kukanganisa network network, senge rakazvimiririra rakavanzika network (VPN) kunyorera.
Inogadzirisa nyaya irikuenderera mberi nekuratidza rezita rekutanga zita mune smart kadhi chiratidzo mubhokisi mushure mekunge mushandisi wakasiyana akashandisa muchina uyu une zvinzvimbo zvinongedzo.
Kugadzirisa nyaya inokonzeresa kutaurirana neTPM kusvika panguva yekubuda uye kutadza.
Inogadzirisa nyaya iyo dzimwe nguva inodzivirira AppLocker kubva mukushandisa iyo ine mutemo wevashambadziri inobvumira iyo kuti iite.
Inogadzirisa nyaya iyo AppLocker muparidzi anotonga dzimwe nguva anogona kudzivirira zvikumbiro kubva pakutakura software modules; izvi zvinogona kukonzera zvishoma chikamu kukundikana.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kusimudzirwa kweserver kune mutongi dunhu kutadza. Izvi zvinoitika kana iyo Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) maitiro akaiswa seYakachengetedzwa Maitiro Chiedza (PPL).
Inogadzirisa nyaya inokutadzisa kubva pakuvhura mudziyo kana uchinyora nzvimbo pamberi pezita rekutanga pawakatanga kupinda muchishandiso.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa system kumisa kushanda uye inoburitsa kodhi ye7E.
Inogadzirisa nyaya inokonzvera maficha kutora nguva yakareba kuti avhure.
Kero kutaridzika kutadza kwakakonzerwa neiyo isiriyo Mushandisi Unokosha Zita (UPN).
Inogadzirisa nyaya mune masumbu mamiriro ayo anokonzeresa ma .vmcx uye .vmrs mafaera kuti asashande mushure mekuchengetedza failover. Nekuda kweizvozvo, kurarama kwekutama uye zvimwe zvigadzirwa zvemuchina (VM) zvekuchengetedza mabasa zvinokundikana ne STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR.
Inogadzirisa nyaya nekukanganisa kunongedzera iyo inogona kukonzera kukanganisa kuti isvike pane isiriyo processor.
Inogadzirisa nyaya inokonzera kunonoka panguva yekuvhara kana uchimhanyisa Microsoft Keyboard Filter Service.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa muchina kukumbira nyowani IP kero mushure mechokwadi.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa iyo Yemukati Intelligent Kutamisa Sevhisi (BITS) kurodha pasi data apo chishandiso chiri muma cell mode pasina yakajeka mushandisi mvumo.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira Nguva Dzose PaVPN (AOVPN) kubva otomatiki kubatanidza painotangazve kubva Kurara kana Hibernate.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa AOVPN tunnels dzevashandisi kushandisa chitupa chisiri icho.
Inogadzirisa nyaya ine AOVPN inoitika kana mushandisi nemidziyo yedhizaini yakagadzirirwa kuti ibatanidze kune imwecheteyo endpoint.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa VPN maapplication kumira kushanda mune dzimwe nguva pavanenge vachiedza kuverenga profiles dzeVPN.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa iyo Optimize Drives dialog kuti itore zvisirizvo izvo zvayakambogadziridzwa dhiraivha inoda kugadziriswazve.
Inogadzirisa nyaya inotadza kudzima inomiririra memory buffer (HMB) kana iwe uchimanikidza kudzima kwechigadzirwa. Nekuda kweizvozvo, solid-state drives (SSDs) haibvise HMB zvemukati.
Inogadzirisa nyaya inogona kukonzera yekumira kukanganisa (0xC00002E3) pakutanga. Iyi nyaya inoitika mushure mekuisa imwe Windows Dzidzo dzakaburitswa kana mushure maApril 21, 2020.
Inogadzirisa nyaya inogona kukonzera kumira kwekukanganisa 7E mukati yrv.sys pamaseva ari kuita seNetwork File System (NFS) basa.
Inogadzirisa nyaya ine Server Meseji Block (SMB). Iyi nyaya inonyora zvisiri izvo Microsoft-Windows-SMBClient 31013 chiitiko muMicrosoft-Windows-SMBClient / Chengetedzo yechiitiko cheye SMB mutengi kana iyo SMB server ichidzoka STATUS_USER_SESSION_DELETED. Iyi nyaya inoitika apo vashandisi veSMB mutengi kana maapplication anovhura akawanda SMB zvikamu vachishandisa imwechete seti yeTransmission Control Protocol (TCP) kubatana pane imwecheteyo SMB Server Iyi nyaya ingangoitika pane Remote Desktop Servers.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kuti SMB ishandise zvisizvo iyo yekutanga, yakachengetwa isiri-Inoenderera Inobata mubato kune faira. Iyi mubato inova isingashande mushure mekanganiso yenetiweki kana yekuchengetedza failover. Nekuda kweizvozvo, kunyorera kunokundikana nezvikanganiso senge STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kurasikirwa kwe data rakanyorwa kana chikumbiro chovhura faira uye chinyore kumucheto kwefaira mune share share.
Inogadzirisa nyaya nemamwe maapplication, akadai seMicrosoft Excel, inoitika kana uchishandisa Microsoft Input Method Edhi (IME) yemitauro yechiChinese neJapan. Iwe unogona kugamuchira kukanganisa, kana iyo app inogona kumira kupindura kana kuvhara kana iwe uchiedza kudhonza uchishandisa mbeva.
Iyo yekuvandudza ine inotevera inotevera inozivikanwa nyaya:
Vashandisi veMicrosoft Input Method Edhi (IME) yemitauro yechiJapanese kana chiChinese vanogona kusangana nenyaya kana vachiedza mabasa akasiyana siyana. Unogona kunge uine nyaya nekuisa, gamuchira zvausingafungire, kana ungatadza kuisa mavara. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve izvo nyaya, matanho ekushandira, uye izvo zvino zvakagadziriswa nyaya, ndapota ona KB4564002
Kuisa iyo yekuvandudza iwe unogona Tarisa Zvekuvandudzwa mune Zvirongwa, kana kurodha pasi gadziriso kubva kuKugadziridza katarogu pano.
Tichifunga kuti parizvino iri sarudzo yekusarudzika, njodzi-inodzivirira inogona kumirira kusvikira mwedzi unotevera painobuditswa kuburikidza neyakajairwa Patch Chipiri.